सताब्दीभरि संबिधानको नौटंकी गरेर मुलुक जनतालाइ बन्दि बनाउने ? मुलुक कहिले बनाउने ? ~ Khabardari.com
सताब्दीभरि संबिधानको नौटंकी गरेर मुलुक जनतालाइ बन्दि बनाउने ? मुलुक कहिले बनाउने ?
समस्या यी टाउके दलको जुँगाको प्रतिष्ठा मात्र हो , अब १०० प्रतिसत सहमती खोजेर आफै पाखन्डी बन्नेहरुसंग के लाग्ला र ? नेपाली जनताले चाहेको जातिय संघियता हैन ,
गाउ पिछे संघिय राज्य हैन ,
यो कुरा गत सालको संबिधान सभामा मत दिएर प्रस्ट संदेश दिएका छन् ,
जातिय प्रदेश चाहिदैन ,
५-७ भन्दा बढी प्रदेश बनाउन पाइदैन
नामको वखेडा झिकेर बालझगडा नगर स्थानीय जनतालाई मतदान गरेर नाम आफै राख्न देउ अब सहमतिको नाममा जनता झुक्याउन पाइदैन |
अब पालो टाउके नेता हरुलाई ठिक पार्ने जिम्मा सभासद र संबिधान सभाको अनि ससक्त खबरदारीको ,
सताब्दीभरि संबिधानको नौटंकी गरेर मुलुक जनतालाइ बन्दि बनाउने ? मुलुक कहिले बनाउने ? संबिधानले, संघिय प्रदेशले मात्र नेपालीको थालथालमा भात दिन्छ ? के यो नै नेपालको सबै समस्याठिक गर्ने कालाजादु हो ? जनता चुतिया बनाउने यो उपाय अब थोत्रो भो नया नेपाल बनाउने मोडेल , बिकाशका नीति , सुससानका नीति, योजना देखाउ, गरेर देखाउ, आफ्नो योग्यता पुस्टि गर !
भुक्न त कुकुर नि भुक्छ , सत्ता झैँ हड्डीमा झगडा नि गर्छ, तर मालिक प्रति बफादार हुन्छ आफ्नो कर्तब्य भुल्दैन
जनताको धैर्यताको बाध टुट्न लागेकोछ , खबरदार !